Baaq Loo Diray Beello Ku Dagaallamaya Hirshabelle – Goobjoog News
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay beello walaalo ah oo ku dagaallamaya deegaanno ka mid ah Hirshabelle iney nabadda qaataan oo xabadda ay joojiyaan.
Xildhibaan Nuur Xaashi warsame oo la hadlay Goobjoog ayaa sheegay in dagaal beeleedyadaas wax faa’ido ah dadka aysan ugu jirin islamarkaana muhiim ay tahay in la joojiyo, isagoo tilmaamay in ay socdaan dedaallo ku aaddan sidii loo dhammeyn lahaa.
Waxa uu sheegay xildhibaanka in waxgaradka iyo sidoo kale madaxda Hirshabelle ay mas’uuliyad ka saaran tahay joojinta colaadahan.
Dagaalladan ka socda deegaanno ka mid ah Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe ayuu sheegay in hadda lagu mashquulsan yahay sidii xal nabadeed looga gaari lahaa.
Dagaal beeleedyo ayaa kusoo noq-noqday deegaannada Hirshabelle, iyadoo weli aanu jirin xal laga gaaray.
Ganacsatadii Ku Hanti Beeshay Dabkii Afgooye Oo Caawinaad Dalbaday